Tyler Cameron haasi kudanana naHannah Brown, asi haatonge kunze - Nhau
Kuru Style Nhau Macelebs Blog
Tyler Cameron haasi kufambidzana naHannah Brown, asi haatonge kunze
Pachine tariro yeTyler Cameron naHannah Brown kudanana.
Maka Bourdillon / ABC kuburikidza neGetty Mifananidzo
Ivo vaviri - vakasangana paakaridza nyeredzi se 'The Bachelorette' gore rapfuura - vaive kunyura mukufungidzira kwerudo munaKurume mushure mekunge vaita kunge vari kugara vega muFlorida. Kubva ipapo, vaviri vacho vese vakati havana kuroora, asi Tyler haana kuvhara mukova pane angangoita kudanana.
'Ndiye mumwe munhu shamwari yangu inodikanwa,' Tyler akaudza E! Nhau padzakabvunzwa nezveyaimbove 'Kutamba Nenyeredzi' champ. 'Ndiri kufara kwazvo kuti isu tinogona kuve nehukama ikozvino. Uye ndizvozvo, iwe unoziva, asi, iwe unoziva, munhu wese anongoita chibvumirano chikuru kubva mune zvese uye ndizvo zvazvichava. Asi, ndinotenda zvikuru kuva naye seshamwari. '
Akaenderera achiti, 'Ndingati tiri shamwari izvozvi. Ini handisi munzvimbo yandakagadzirira kufambidzana nemunhu. Saka, kana ndangosvika panzvimbo iyoyo, pamwe rimwe zuva, asi izvozvi ndinongotenda kuti tinogona kuva shamwari. '
imbwa iri sei mukadzi bounty muvhimi?
John Fleenor / ABC kuburikidza neGetty Mifananidzo
Hana, uyo ane mukurumbira akarambana nemukomana Jed Wyatt mushure zvakaratidzwa kuti aive nemusikana paanokandwa pa 'The Bachelorette,' achangobva kutaura kuti haasi kupokana nekuve nemukomana, asi ari kupomba mabhureki ekutanga mhuri kwenguva iripo.
'Dai iwe ungadai wakandibvunza semakore mashoma apfuura, ndingadai ndakave, senge, oh chokwadi na25 ndakaroora. Uye pamwe kufunga nezvevana mune inotevera, sekuyedza kubata pamuviri izvozvi, 'akadaro. 'Shamwari dzangu zhinji dzine vacheche uye ndivo vanaamai vakanakisa, asi ini handina kuzvifungidzira, ini handisati ndagadzirira izvozvo izvozvi. Ndinoreva, ndinogona kuva. Kana chimwe chinhu chakaitika, ndinogona kuva. Asi ndichiri kuedza kutsvaga hupenyu hwangu. '
Akawedzera, 'Zvakare, ini handina ... unofanirwa kuva nechakakosha chimwe cheicho. Uye handidi. '
Kathy Ireland anoisa mune zvisingawanzo pikicha nemwanasikana anoshamisa, 16: Pic
'Flip kana Flop' nyeredzi Tarek El Moussa anopemberera kuve makore matatu asina gomarara
irachael ray iri kugara kupi manje
imbwa bounty muvhimi nemukadzi
roseanne barr uye donald trump
ko dombo rakabiridzira mukadzi wake